Diamond gbara mgbaaka (14K) - Popular Jewelry
Diamond Swirl Ring (14K)
A na-eji ọla edo edo edo edo edo mara mma karat 14 wee maa mma ya na mkpokọta drọk 1.15.
Prekpụ Dị Oké Ọnụ Ahịa: 14 Karat Yellow Gold.
Gburugburu Amamiihe Cut na Baguette Cut (Ihe dị ka 1.15 Cts.)
Hedị dị elu: 25 mm.
Obosara mgbaaka: 20 mm.
Ikike dịnụ: ~ 5.7 gram *
* Wetụ niile na - eche ihu